Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. दाङमा अमेरिकन फौजी किराकोे प्रकोप – Emountain TV
दाङ, १० जेठ । लामो समयदेखिको लकडाउनले गर्दा आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुराउन नपाएर मूलुकभरका किसानहरु मारमा परिरहेका छन् । तर दाङमा लकडाउनको मारसंगै मकै खेती लगाएका कृषकहरुलाई अर्को समस्याले पिरोल्न थालेको छ । पछिल्लो केही दिन देखि मकै खेतीमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोपले लगाएको अधिकांश मकै सखाप पार्न लागेपछि कृषकहरु आत्तिएका छन् ।
यसबर्ष समयमै पानी परेकाले दाङका कृषकहरुले समयमा नै मकै लगाएका थिए । समयमा नै लगाउन पाएकाले गएका बर्षहरुमा भन्दा यसबर्ष राम्रो उत्पादन हुने उनिहरुको आशा थियो । लकडाउनका कारण अन्य काम गर्न नपाएको कारण मकै खेतीलाई नै कृषकहरुले आफ्नो जिविकोपार्जनको आधार बनाउन खोजेका थिए ।
तर पछिल्लो केही दिन यता मकैवारीमा अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप बढे पछि कृषकहरुलाई पिरोलेको छ । लगाएको सबै मकै नष्ट हुँदा फेरी लगाउनु पर्ने अवस्था आएको कृषकको भनाई छ ।
शान्तिनगर ४ का थल्लु प्रसाद खरालले फौजी किराले मकैमा धेरै क्षति पु¥याएको भन्दै वडाबाट दिएको किटनाशक विषादीले आफुहरुलाई नपुग्ने बताउनुभयो ।
दाङको लमही, घोराही, तुलसीपुर लगाएत अन्य स्थानीय तहमा पनि यो किराको प्रकोप देखिएको छ । गाउँपालिकाले आकस्मिक बाली कोष स्थापना गरेर सो कोषबाट प्रत्येक वडामा ३० विगाहलाई पुग्ने विषादी वितरण गरेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख यमकान्त पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
यो किराले १ सय ३२ वटा बालीलाई नष्ट गर्ने सक्दछ । तर सबैभन्दा बढी क्षति मकैलाई गर्ने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षित विषादीको प्रयोगबाट गर्ने सकिने कृषि शाखाले जनाएको छ ।